श्रीमतीको दोस्रो पुण्यतिथिमा ढोका अगाडि फोटो राखेर भावुक बने मदनकृष्ण ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमतीको दोस्रो पुण्यतिथिमा ढोका अगाडि फोटो राखेर भावुक बने मदनकृष्ण !
कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठका लागि चैत २८ गते निकै पीडादायी दिन हो । दुई वर्षअघि क्यान्सरका कारण श्रेष्ठकी पत्नी यशोदा सुवेदी श्रेष्ठको निधन भएको थियो । आफूलाई असा`ध्यै माया गर्ने र केयर गर्ने श्रीमती गुमाउनुपर्दा मदन`कृष्ण त्यसदिन निकै रो`एका थिए । धार्मिक तिथिअनुसार शुक्रबार यशोदाको दोस्रो पुण्यतिथि । मुलुक लकडाउनमा छ । यस्तो अवस्थामा घरकै परिवारका सदस्यले यशोदाको वार्षिक श्रा`द्ध गरेका छन् । दोस्रो पुण्य तिथिका दिन मदनकृष्णले श्रीमतीको नाममा बत्ती बालेका छन् । बत्ती बालेपछि घरको ढोका अगाडि राखेको श्रीमतीको तस्बिर हेरेर मदनकृष्ण भावुक बनेका थिए ।
छोरा यमनले भने श्रा`द्धको काम गरेका छन् । बुबा बिरामी र कमजोर भएपछि छोरी सराना श्रेष्ठ पनि अहिले नेपालमै आएकी छन् । सन्तान विदेशिएपछि लामो समय एक्लै बिताउँदै आएको मदनकृष्णका सामु`न्ने एउटा सुखद संयोग जोडिन पुग्यो। उनीहरूका एक्ला छोरा यमन बैंककबाट अमेरिका पुगे र भएभरका सबै बेचबिखन गरेर सधैंका निम्ति सपरिवार नेपाल फर्किएर आए। ते`ह्र वर्ष उतै बसेर एमबिए पढेका उनी कुनै होटलमा म्यानेजर थिए। जागिर र घर पनि सम्हालेर जीवनभर आफूलाई एकोहोरो कलाकारितामा ला`ग्न सघाएकी श्रीमतीलाइ सम्झेर उनि भावुक भैइराहाका हुन्छन ।
कलाकार श्रेष्ठको जन्म वि.सं. २००७ साल वैशाख ७ गते काठमाडौंमा भएको हो। उनी रामकृष्णलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मीका एक्ला छोरा हुन्। त्यसो त अर्की आमाका तर्फबाट भाइ र दुई बहिनी छन्। उनका भाइ नीरव श्रेष्ठ अमेरिकामा नै छन्। बहिनीहरू साधना र सविना`चाहिं यतै छन्। उनका पिताका चारवटा प`त्नी थिए। मदनकृष्ण जन्मेको ६ महिनापछि उनकी आमा ल`क्ष्मी बितिन्। त्यसपछि अर्को विवाह गरे। उनी पनि बितेपछि फेरी अर्को विवाह गरे। दुई प`त्नीबाट जायजन्म भएनन्। कान्छी आमाले मदनकृष्णलाई छोराकै व्यवहार गर्छिन् र मदनकृष्ण भन्छन्, आमाकै जति माया मैले कान्छीआमाबाट पाएको छु।
मदनकृष्णको बाल्यकाल काठमाडौं जितपुरफेदीमा बित्यो। कहिलेकाहीं खसिखेल पनि पुग्थे। त्यहाँ उनका थुप्रै्र साथीहरू छन्। रञ्ज`ना हल बनाउँदा इँटाको मोटर बनाएर खेलेको उनको सम्झना छ। उनको स्कुले जीवन अलि डामाडोल नै र`ह्यो। १ कक्षा विश्व ज्योति सिनेमा भवनअगाडिको स्कुलमा पढे। २, ३, ४ जितपुरफेदीमा पढे। ५ कक्षामा कन्या विद्या`मन्दिरमा, ६ कक्षा दरबार हाइस्कुल, ७ पद्मोदय, ८ शान्ति विद्यागृह, ९ जुद्धोदय, १० त्रिभुवन दरबार स्कुल, टेस्ट पास भए शान्ति निकु`ञ्जबाट।
फेस`बुक लाइ`भमा आएर यी युव`तीले गरिन् यस्तो ! एलिसा बारे यस्तो खुलासा !
ओलीको राजिनामा मागेर बाहिर निस्केका प्र`चण्ड बारे भर्खरै यस्तो समाचार !!
कुलमानलाई फेरि जिम्मे वारी दिन प्रच ण्डको अडान, ओलीलाई दिए चेतावनी